ရူဒီဂါအလွန် ပီအက်ဂျီမှ Kimpembe အပြောင်းအရွှေ့ ချယ်လ်ဆီးတို့အတွက်ဖြစ်လာပါ့မလား.... - YTV Channel
Home | Sports | ရူဒီဂါအလွန် ပီအက်ဂျီမှ Kimpembe အပြောင်းအရွှေ့ ချယ်လ်ဆီးတို့အတွက်ဖြစ်လာပါ့မလား….
ရူဒီဂါအလွန် ပီအက်ဂျီမှ Kimpembe အပြောင်းအရွှေ့ ချယ်လ်ဆီးတို့အတွက်ဖြစ်လာပါ့မလား….
ယခုနှစ်ရာသီမှာ ကစားသမား အပြောင်းအရွှေ့အအေးဆုံး အသင်းဖြစ်တဲ့ ချယ်လ်ဆီး အသင်းကတော့ အသင်းက ထွက်ခွာသွားတဲ့ ခံစစ်မှုး ရူဒီဂါနေရာမှာ ပီအက်ဂျီ အသင်းမှ Kimpembe ကိုခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ သိရပါတယ်.... ပီအက်ဂျီအသင်းဆီကို ပြတ်သားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခိုင်းထားတယ်လို့ ကစားသမားဖက်မှ ဆိုထားပါတယ်...အသက် ၂၆ နှစ်ရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့ ပီအက်ဂျီ ခံစစ်မှုး Kimpembe ဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကတည်း ကနေ ပီအက်ဂျီ လူငယ်အသင်းမှခေါ်ဆိုထားတဲ့ ကစားသမားဖြစ်ပြီး ပီအက်ဂျီခံစစ်တွင် တံတိုင်းသဖွယ် ၇ နှစ်တာလုံးလုံး အသုံးတော်ခံလာခဲ့ပြီး အရမ်းမတော်ရင်တောင် နောက်တန်းမှာ စိတ်ချရတဲ့ ခံစစ်မှုး တစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်.....
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာ ပြောကြားချက်အရ သူ့အနေနဲ့ ပီအက်ဂျီက ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကို သိချင်နေပြီ ဖြစ်ပြီး ခိုင်မာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချပေးဖို့ တောင်းဆိုထားတယ်လို့ ပြောကြားထားပါတယ်....အပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သတ်ပြီး မေးခဲ့ရာမှာတော့ "ကျွန်တော်ဘာကိုမှ အတိအကျမပြောနိုင်ပါဘူး ဒီအသင်းကိုရောက်နေတာ ကိုးနှစ်ကျော် ဆယ်နှစ်နီးပါးလောက်ရှိပါပြီ ကျွန်တော် အနာဂတ် စီမံကိန်းက ဘာလဲဆိုတာနဲ့ အခုလက်ရှိ နိုင်ငံအသင်းအတွက် ကျရာနေရာနေ ပေးဆပ်ဖို့အတွက်ပဲ စဉ်းစားထားပါသေးတယ်" ဆိုပြီး ပြောကြားထားပါတယ်...
ရီးရဲလ်ကို ရောက်ရှိသွားတဲ့ ရူဒီဂါနေရာကို အစားထိုးဖို့ Kimpembe ကို ချယ်လ်ဆီးနည်းပြကြီး သောမတ်တူချယ်အနေနဲ့ ခေါ်ယူဖို့ဖြစ်လာပါ့မလား အားကစားချစ်ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ရော ဘယ်လိုမြင်လဲ ဆိုတာလေးတွေကို ကွန့်မန့်လေးမှာ ဖြေသွားပေးပါဦးနော်....